Garsoore Sports – Page 6 – Hoyga Wararka Cayaaraha
Xiddiga Dalka Biljimka kasoo jeeda Ee Eden Hazard ayaa Lacag Khasaartay noqday marka loo eego sida uu uwaayey wakhti ku filan uu Kooxdiisa la qaato. Laacibkii hore Ee Kooxda Chelsea Hazard ayaa...
Kaddib Goolkiisii 21aad Ololahan, Waa Maxay Rikoorka Uu Messi Jabinayo?
Cayaaryahanka kooxda Kubbada-cagta ee Barcelona iyo xulka Argentina Lionel Messi ayaa xalay gaaray rikoor taariikhi ah kaddib kulankii ay kooxdiisa Barca xalay natiijo 4:1 ah ku dardareen kooxda SD Huesca kulan ka...
Ibrahimovich Oo Xulka Sweden Dib Loogu Yeeray 5 Sano Kaddib
39 Sano jirka Zlatan Ibrahimovich ayaa Dib ugu soo laabtay Xulka Qaranka Sweden uu dib uga soo muuqan doono Kulamada ay ciyaarayaan. Ilaa 2016-kii ayaa Ibrahimovich waxa uu ku dhawaaqay iskaga fadhiisiga...
Website-kii & Akoonadii baraha Bulshada Real Madrid Oo La Jabsaday
Sida ay daabaceen maanta oo sabti aheyd qaar ka mid ah warbaahinta Dalka Spain waxaa Koox Computerada udhaca ay jabsadeen Akoonadii Baraha Bulshada Kooxda Real Madrid iyo website-kooda. Weeraryahanka Kooxda Real Madrid...
Arsenal Oo Dib Usoo Ceshaneysa Xiddigeeda Guendouzi
Laacibka Matteo Guendouzi ayaa waxa la war geliyey inuu udagaal galo Booskiisa maadaama ay ciyaartoy ku boos ah naadiga kusugan yihiin. Timo weynahaan Khadka dhexe kabiir ku noqday ayaa aqbalay in uu...
Arsenal Oo Toos Ula Wareegeysa Odegaard – Balse Shuruud Ayaa Ku Xiran
Kooxda kubbada-cagta ee Arsenal ayaa eegi doonta xulashooyinka ay Martin Odegaard ugu sii heyn karaan Emirates Stadium xilli-cayaareedka soo aadan. Mikel Arteta ayaa la dhacay qaab cayaareedka khadka-dhexe tan iyo markii uu...
Donny van de Beek Oo iskaga Tegaya Manchester United
Kubad Sameeyaha Khadka Dhexe dheela Donny van de Beek ayaa doonaya inuu iskaga tego Kooxda Manchester United uu boos joogto ah ka heysan. Ole Gunnar Solskjaer ayaa usheegay van de Beek in Boos...
Kooxo Ka dhisan London Oo isku Heysta Paulo Dybala
Kooxo Ka dhisan Magaalada London Caasimada Dalka Ingiriiska ayaa isku heysta soo qaadashada Laacibka Paulo Dybala. Dybala ayaa looga gacan haatinayaa Horyaalka Premier League iyadoo Chelsea iyo Tottenham mid walbo ay iyada...
Chelsea Oo Cabsi ka qabta inuu ka tego Ciyaaryahan Muhiim Ah
Ciyaaryahanka Reer Jarmal Antonio Rudiger ayaa heshiiska uu kula jiro Naadiga Chelsea uu dhacayaa Sanadka Dambe sidaa awgeed waxaa la qorsheeyey in loo cusbooneysiiyo. Tababaraha Blues Thomas Tuchel oo hadda Chelsea ka...
Zlatan Ibrahimovich Oo Diiday In Qandaraas Cusub Saxiixo
Zlatan Ibrahimovich ayaa warar soo baxay maanta oo talaado ah sheegaya inuu diiday Qandaraas cusub in Kooxda Ac Milan usaxiixo. Weeraryahanka Reer Sweden ayaa umuuqda mid ka huleeli kara Garoonka sansiro Ee...